दाई नभएको बेला भाउजुले बोलाउथिन – Ekathmandunepal
Homeब्लगदाई नभएको बेला भाउजुले बोलाउथिन
३ पुष २०७४, सोमबार २०:४६ ekathmandu Nepal ब्लग 0
धेरै पछी म आफ्नो अनुभब बताउदै छु । मेरो छिमेकी दाजु अफिसको कामले तीन महिना बिदेश जानु परेकोले भाउजुले मलाई घर कुर्न बोलाइ रहन्थिन । मिठा मिठा कुरा गर्न खप्पिस थीन उनी । कारीब ४० बर्ष कि होलिन तर सारीरिक बनावट निकै नै लोभ लाग्दै थियो । मलाई त उन्को हिप बडो प्यारो लाग्थ्यो ……………..
म सँग टासिन आएर मेरो लिङलाई ट्राउजर बहिरै बाट खेलाउन थाल्छिन ……………..उफ्फ्फ्फ्फ मज्जा लाग्न थाल्यो मलाई पनि……….
चिक्न थालियो मज्जाले कारीब बिस मिनेटको चिकाइमानै उनी फेरी पानी फाल्न थाल्छिन । ” निकैनै आनन्द बनाइ दियोउ आज मेरो पुतिलाई ” भन्दै उन्ले मलाई ग्वाम्म अङालो कस्छिन………………….”किन र भाउजु दाइले गर्दैनन कि के हो ?” म सोध्न थाल्छु उन्लाई ……………………..
“बाबु लाई देख्दा मलाई कस्तो कस्तो हुन्छ तर आज मेरो सपना साकार भएको छ ” मलाई गालामा चुवाप्प मोइ खन्छिन र फेरी दुबै गिलासमा वाइन भर्न थाल्छिन ……………………….
उनी जुरुक्क उठेर वाइन भर्न जादा वा क्या दामी चाक देखिएको …………………………..
” दाजु हिजडा जस्ता छन ख्वाप्प हाल्यो तीन चार पटक धक्का मार्यो अनी झार्यो र सुत्यो गर्छन् कस्ले पो एस्तो मज्जा दिनु र ” भन्न थाल्छिन ………………………
फेरी बिस मिनेट चिके पछी उन्लेनै भो भो अब टट्टायो भने पछी मैले छाडे ………………………………….
” आहा बाबु एस्तो चिकाइ पो चिकाइ ” ……..
मलाई पनि एकदमै योवनको मात चढेको थियो अनि (205)
यी पोजिसनहरुमा सम्भोग गर्दा लामो समय सम्म गर्न… (159)
के खाँदा कोलेस्टेरोल घट्छ २ मिनेट समय निकालेर अवश्य पढौं (96)
मेरो मस्त जवानी हेर्न नसक्नेले टीभी बन्द गर्नुहोस् म… (82)
अब जंगलमा पाइने जुकाको मूल्य आकासिने यस्तो छ संकेत,… (73)
८ घण्टाभन्दा धेरै सुत्नुहुन्छ ? तपाईंका लागि खुसीको खबर छ (40)
थाहा पाउनुहोस्, यस्तो योनी हुने महिलाले धेरै यौन… (2,772)
एकैदिन सात चोटि ठोक्दा पनि मेरो देवरले मेरो प्यास… (2,450)